क्यान्सर | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » डक्टर्स आर्टिकल » "क्यान्सर" क्यान्सरबाट बाँच्ने आधार, समयमै उपचार - डा. राजेन्द्रप्रसाद बराल, बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ / क्यान्सरका एक सय भन्दा बढी प्रकार हुन्छन् ।् जसले शरीरको जुनसुकै भागमा पनि असर गर्न सक्छ । बिश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २००८ मा ७६ लाख मानिसको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको थियो । यो विश्वभरमा हुने समग्र मृत्युको १३ प्रतिशत हो । क्यान्सरका कारण हुने [...]
क्यान्सरको कारण बन्नसक्छ ग्याष्ट्रिक डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेत फिजिसियन, वीर अस्पताल मानिसले खाएको खाना पचाउने काम पाचन प्रणालीको हो । पाचन प्रणाली मुखबाट शुरू भएर खानाको नली, आमाशय, सानो आन्द्रा, ठूलो आन्द्रा हुँदै मलद्वारमा पूरा हुन्छ । पाचन प्रक्रियामा खानालाई केही समय भण्डारण गरेर पाचन प्रणालीमा लैजाने अंग आमाशय हो । आमाशय र सानो आन्द्राको शुरूको [...]
Recent Posts	स्वास्थ्यकर्मी संघको अध्यक्षमा घिमिरे, महासचिवमा मुडभरी
Homepageहेर, डाक्टरी विद्यार्थीको विजोग !डाक्टर साहेब, कहाँ गयो इथिक्स ?लापरवाहि गर्ने चिकित्सकलाई अदालतको कारवाहिकाउन्सिलमा पास विशेषज्ञ डाक्टरको नामावलीबिरामीको ब्यापार गर्न पाइँदैनडा. कोइरालाको राजीनामाको थप रहस्यन्याम्सको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिकहेल्थ अवार्डस्वास्थ्यले असमानता बढाएको छ : गगन थापा